Maxaa keenay in Sacuudiga, Qatar, UAE iyo Turkiga ay ku tartamaan Somalia? | Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 14 May 2018 15 May 2018
Iyadoo weli ay muuqato loolanka iyo siyaasada is-diidan ee u dhaxeysa Wadamo dhowr ah, ayaa hada Soomaaliya waxaa hareeyay halgan Goboleed oo u dhaxeeya Dowladaha Khaliijka — gaar ahaan Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta oo ah hal dhinac ah iyo Qatar oo taageero ka heleysa Turkiga.
Meelaha maalmahan uu mashquulka ka jiro ama uu ka socda ayaa ah Xeebaha Soomaaliya, balse taasi maahan mid kaliya khatar ku ah xasiloonida Soomaaliya, laakiin, waa mid khatar ku ah mustabqalka Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa waxaa ragaadiyay xasilooni darro muddo tobanaan sano ah, iyadoo dhowrkii sano ee la soo dhaafay la harjadeysay soo jiidashada maagashi shisheeye, balse in tartan u dhaxeeya Wadamada Khaliijka ayaa sababay in si weyn loo soo gallo Soomaaliya.
Shirkad laga leeyahay Dalka Imaaraadka ayaa 2017-kii waxey saxiixday heshiis ku kacaya 336 milyan oo doolar ($336 million) si loo ballaariyo Dekada Magaalada Boosaaso oo ka mid ah dhulka ay maamusho Puntland.
Wax ka yar hal sano, ayaa hadana Shirkad kale oo laga leeyahay Dalka Imaaraadka Carabta waxey saxiixday heshiis ku aadan horumarinta Dekada Berbera ee Somaliland, waxaana heshiiskaasi uu ku kacayaa ilaa $440 milyan iyadoo Itoobiya ay saamigeedii ku leedahay halkaasi, inkastoo aan la shaacin.
Si la mid ah, Turkiga oo saaxiib dhow la ah Qatar, ayaa kor u qaaday maalgashi badan oo malaayiin doolar ah, taasi uu ku sameynaayo Soomaaliya.
Shirkad laga leeyahay Turkiga ayaa maamusha Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, tan iyo 2014-kii iyadoo Shirkadaha kale Turkida ah ay wadeen howlaha dhismaha Wadooyinka, Dugsiyada iyo Isbitaallada.
Tartanka nuucan ayaa kordhay tan iyo bishii Juun markii Dalalka ugu awooda badan ee Khaliijka ay xiriirka diblomaasiyadeed u jareen Dowladda Qatar, taasi oo lagu eedeeyay in ay taageero u fidiso Ururo argagixiso, inkastoo Qatar ay wax kama jiraan ku tilmaamtay eedeymihii loo jeediyay.
Xiisad ka oogan Bariga Dhexe waxay ku dhiirigelineysaa rabitaanka lagu xakamaynayo Geeska Afrika iyo biyahooda, sida ay sheegtay Wakaalada Wararka ee Reuters oo soo xiganeysa diplomaasiyiin, ganacsato iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed.
Soomaaliya ayaa waxey ku dhowdahay waddooyinka muhiimka ah ee saliida, iyadoo Dekadaheeda sidoo kale ay u adeegi karaan Itoobiya oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 100 milyan.
Wadamada Khaliijka ayaa xiriirka ganacsi iyo mid diinba qarniyo badan waxey la leeyihiin balse, xiriirkaasi ayaa hada muuqda mid cirka isku shareeray iyadoo Kooxo cusub ay soo baxayaan.
Rob Malley oo ah Madaxa Kooxda Dhibaatooyinka Caalamka ayaa waxuu sheegay in Soomaaliya ay markan la qasatay dadaaladii dhexe si ay u tijaabiso saameynteeda, ganacsiga, militariga iyo Xuduudaha.
Diblomaasi sare oo ka tirsan Gobolka Geeska Afrika ayaa waxuu sheegay in Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta ay si tartiib tartiib ah u eegayaan xeebaha Soomaaliya – Jabuuti iyo Ereteriya waqooyiga – iyagoo ah “garabka reer galbeedka”.
Qadar iyo Turkiga oo maalgashigooda haatan ku dhowyihiin Magaalada Muqdisho, ayaa diiradda saaraya taageerada Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Maxamed.
Madaxweyne Farmaajo iyo Saaxibadiisa ayaa loo arkaa in ay daacad u yihiin Xukuumadda Doha, kadib markii ay ka soo haleen dhaqaalo badan oo loo adeegsaday doorashadii dhacday 2017-kii.
Sarkaal ka tirsan Qatar ayaa u sheegay Reuters in Xukuumadda Doha ay bixisay lacag dhan $385 milyan, taasi oo loo adeegsanayo kaabayaasha, waxbarashada iyo gargaarka bani’aadamnimada ee dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Sarkaal ayaa sheegay in ay si toos ah ula macaamilayaan dowladaha gobolka ee Soomaaliya, maadaama ay UAE samaysay, waxay wiiqday dawladda dhexe.
Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beileh ayaa sheegay in Daalka Khaliijka ay heystaan dhaqaalle, islamarkaana ay Soomaaliya u soo dhaweeneyso hab furun.
Balse, waxuu carabka ku adkeeyay in dhaqaalahaasi uu soo maro albaabka sax, sidaasi ayuu u sheegay Wakaalada Wararka ee Reuters.
Waxaa jiray wax dan u ah ganacsiga Soomaaliya, wax ka yar 10 sano ka hor.
Balse, taas waxey isbadashay sanadkii 2011-kii markii Xoogaga Al Shabaab ay ka baxeen Muqdisho.
Bishii Janaayo, Turkiga ayaa bilaabay howlgallada gargaarka ee looga hortagayay macluushu, iyadoo howlahaasina ay noqdeen mid albaabada u fara mashaariic hada u muuqda maalgashiyadii ugu ballaarnaa ee laga sameeyo Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujineysa in maalgashiga cusub uu noqdo mid gacan ama kaalin weyn ka qaata dib u dhiska Dalka Soomaaliya.
Ururinta canshuuraha oo wanaagsan waxay kor u qaadaysaa dakhliga dawladda, laakiin tan kaliya waxay dabooshaa mushaaraadka dawladda. Balse waxaa aad loogu baahan yahay dhismaha wadooyinka, dugsiyada iyo aasaas kale oo laga hergeliyo Magaalada Muqdisho.
Biyahaasi qaarkood ayaa ah kuwa ay bixin kiraan Shirkadaha Bariga Dhexe iyo hay’adaha samafalka ee ka howlgalka Dalka.
Balse, waxaa soo baxeysa in lacag ay qaseyso xasiloonida dalka, taasi oo xoojineysa xiisad u dhaxeysa Imaaraadka iyo Soomaaliya, maadaama Dowladda Dhexe ay dhaqaalo ka hesho Turkiga iyo Qatar, hadala Puntland iyo Somaliland ay dhaqaalo dhankooda ka helaan Imaaraadka Carabta.
“Maalgashiyadaan waxa ay saameyn ku yeelanayaan xasilloonida siyaasadeed, waxaana ay sii xumeynayaan xiriirka ka dhexeeya Dowladda Dhexe iyo Maamul Goboleedyada”, sidaasi waxaa yiri La-taliyihii hore ee Sirdoonka Qaranka, Xuseen Sheekh-Cali.
“Tani waxay keeni kartaa qalalaaso dastuuri ah oo ay ka faa’ideystaan Xoogaga Al Shabaab oo Dagaal kula jira Dowladda Federaalka Soomaaliya”.
Dhibaatada Khaliijka ayaa horay u sii ballaarisay wadiiqooyinka Soomaaliya. Xukuumadda dhexe waxay ku sii jirtey dhexdhexaadin, in ay ka careysiiso UAE iyo Sacuudi Carabiya, oo Puntland iyo Somaliland ay ka soo horjeedeen Qatar.
“Ka soo kabashada khilaafkan waa mid aad u adag,” intaasi ayuu hadalkiisa ku daray Sheekh Cali, waxuu sidoo kale xusay in aan dhibkaasi laga soo laaban Karin hadii aan la helin midnimo.
Madaxtooyada Soomaaliya iyo Dowladda Imaaraadka Carabta kama aysan jawaabin fallooyinka inta badan la qoro ee khuseeya Soomaaliya iyo xiisada labada Dowladdood ka dhex oogan.
Wadamada Reer Galbeedka waxay ka cabsi qabaan kooxaha ka soo horjeeda Khaliijka inay Soomaaliya ka baxaan, iyagoo kaashan kara lacago badan oo balaayiin doolar ah, iyadoo ay socoto dadaallo Qaramada Midoobay ay ku dhiseyso Ciidanka Xooga Dalka oo la doonayo in ay ka awood roonaadaan Al Shabaab.
Dhibaatooyinka siyaasadeed ee u dhexeeya Muqdisho iyo maamul-goboleedyada ayaa wiiqaya dadaalka xukuumadda ee lagu xoojinayo nidaamka maaliyadeed iyo in ay bilaabaan hawlaha kale ee muhiimka ah, sida ay sheegeen diplomaasiyiin.
Bartamihii Abriil, Soomaaliya iyo UAE ayaa soo afjaray iskaashiga milatari, taasi oo soo bilaabatay 2014-kii.
Imaaraadka ayaa bixin jiray tababaro iyo muusharaad la siiyo Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya iyo kuwa kale oo dhanka Badda ah oo loo tababari jiray Maamulka Puntland, waxaasi oo idil haatan waa ay soo afjarmeen.
Tani waxay timid kadib markii ciidamada amniga ee Soomaaliya ay ku dhawaad $ 10 milyan oo doolar ah oo ay leedahay Imaaraadka iyo Shaqaale ay ku qabteen Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho.
Talaabadaasi ayaa noqotay mid ka careysiisay Dowladda Imaaraadka Carabta, keentayna xiisad cusub oo dhexmarta Xukuumaddaha Muqdisho iyo Abu Dhabi.
Bashii la soo dhaafay ayaa Wafdi uu hogaaminayay Madaxweynaha Puntland waxay u safreen Dubai si ay ula kulmaan Tababarayaasha Imaaraadka ee bixinayay tababarada iyo mushaaraadka Ciidanka Bada ee Puntland.
“Maalgashiga malaayiin doolar oo Soomaaliya ka socda xilligan xasaasiga ah waa mid aad u muhiim ah,” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali.
Bishii la soo dhaafay, si la mid ah, mas’uuliyiinta Maamulka Somaliland waxay marti-galiyeen diblomaasiyiin ka socday Imaaraadka Carabta , waxaana labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka Somaliland iyo Imaaraadka.
Ugu dambeyn, Harry Verhoeven, oo ah Professor wax ka dhiga Jaamacadda Georgetown ee Qatar, ayaa sheegay in jahwareer siyaasadeed uu muuqdo, taasi oo ku sheegay in ay tahay wax aad u xun islamarkaana aan loo baahneyn.
Waxaa Turjumay Cabdirisaaq Maxamuud Tuuryare
Deadly fighting kills 27 people in central Somalia